Indlela yokulibala malunga neHackers Forever - Iingcebiso ezivela kwi-Semalt
Ukufumana iwebhsayithi kufana nokwakha isitolo okanye iofisi. Iwebhusayithi yindawo apho wakhoabaphulaphuli bangena baze bathenge. Njengoko wenza indawo yakho iphile, kufana nokuvula ivenkile ukuvumela abantu. Nje ngohloboisitoreji, abantu bafanele bafike kwiwebhusayithi yakho njengoko beza kwisitolo, kwaye mhlawumbi bathenge xa ​​bevakalelwa ukwenza njalo.
Nangona kunjalo, umntu unokufuna ukufumana ulwazi ngaphandle kwemvume yakho. Kanyekufana neofisi efanelekileyo, abanye abantu kufuneka bafike kwiwebhusayithi yakho kwaye bafumane ukungena okungagunyazisiweyo okanye ukusetyenziswa kolwazi lwakho. Nje ngeziphumo,iingcango zivaliwe, kwaye izakhiwo zinamasango - seo services online. Isayithi idinga olu hlobo lokukhuselwa kwabahlaseli. Hackers baya kwiwebhusayithi kwaye bebaIdata ebonakalayo njengolwazi lwekhadi lomthengi. Imilinganiselo esemthethweni ukuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ihlala ikhululekile kulezihlaselwa. Kwiimeko ezininzi, amanye amazwe asalubamba njengembopheleleko esemthethweni.
Kule nqaku, u-Igor Gamanenko, u iSemalt Umphathi Wempumelelo yoMthengi, uxela indlela yokukhusela iwebhusayithi yakho kwi-cyber ukuhlaselwa.
Ukukhusela ubumfihlo bamakhasimende
Abahlaseli banamaphulo amaninzi angalunganga xa benza ii-hack zabo. Kwezinye iimeko,bafuna ukuba okanye ukuphazamisa udumo lwenkampani yakho. Kwezinye iimeko, abahlaseli baphazamisa kwaye bashiya imifanekiso emihle kwiakhawunti zabantuukukhwaza..Uluhlu lwemonakalo inkohlakalo olunokuyenza lungapheliyo. Nangona kunjalo, kukho imilinganiselo ethile, eyenza ukuba iwebhusayithi yakho iphephile. Njengengamasela, banokuba xa ushiya umnyango ovulekile. Ezinye izenzo ozenzayo ukujongana nale nto ziquka:
Hlalani usesikhathini. Kubalulekile ukuba uhlale wazi izicwangciso ezintsha, abagculeliunokusebenzisa nanini na. Ngenxa yoko, unokuyilumkisa kwaye usebenzise amanyathelo afanelekileyo ngexesha, phambi kokuba atshaye. Ezinye iiwebhsayithi ezinjenge "Iindaba zeHacker"unokukunika ulwazi oluxabisekileyo.
Ukuthintela ulawulo lokufikelela. Kwiziko lewebhu, ulwazi lolawulo kufuneka lube lukhulumfihlelo. Ulawulo lolawulo lungaba yindlela elula yokwenza i-hacker ukufumana ulwazi olupheleleyo lwewebhusayithi. Kubalulekile ukusebenzisa loginulwazi kunye neephasiwedi, ezinzima ukuziqiqa. Kwakhona, unako ukukhawulela inani leemvavanyo ezilandelelanayo ezingaphumelelanga. Lo mzekelokufuneka zibandakanye ii-imeyli ukususela kumntu onokukukhangela kuqala kwaye utshintshe iphasiwedi.
Ukhuseleko lwenethiwekhi. Ukumisa udonga lomlilo wenethiwekhi kunokunceda inkampani yakho igcineuninzi kwiimvavanyo zokukhahlela. Omnye makabeke kwaye aqhubeke nokuhlaziya indonga zomlilo kunye nokuqinisekisa ukuba iikhomputha zilawulwa kakuhle.Ngokomzekelo, iikhompyutheni zingangena emva kwemizuzu embalwa yokungasebenzi.
Ukhuseleko lwewebhusayithi kunye nabasebenzisi balo lubaluleke kakhulu. Hackers baninziizixhobo kunye nobuchule abazisebenzisayo ukufikelela kwiwebhsayithi kwaye bafeze imisebenzi embi. Ezinye iindawo ezixhaphakileyo zomsundu zibandakanya abantuUkuqokelela idatha yekhadi lesikweletu kwiwebhusayithi kwaye uyayithengisa ngomnatha omnyama. Ukuze ugweme iingxaki ezinjalo, abanikazi benayithi bangasebenzisa esi sikhokeloqinisekisa ukuba kukho ukhuseleko olwaneleyo kunye nokhuseleko. Ezi nyathelo zinokukugcina, inkampani yakho okanye abasebenzi bakho izigidi zemali.